Ntube Echere Iche Iche Iche Maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị - Atụmatụ Echiche Tattoos
Ntube Iche Iche Iche Iche Maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị
1. Ibe anụ ugo na-eji ejiji ink nke ifuru na-eme ka nwoke mara mma
Ndị ikom Brown na-agakarị na-egbu egbu anụ ube na ubu na-eji nkocha ink nke pink; egbu egbu egbu a na-eme ka ha maa mma
2. Ogbugbu nke anụ ugo nke dị n'elu ọnụ na-eme ka mmadụ dị ka onye na-ele anya
Ndị mmadụ ga-aga maka igbu egbugbere ọnụ na-enwe nkịkị ink na-edegharị n'elu ha iji mee ka ha dị ka ọkpụkpụ
3. Oke-ugo na-egbuke egbuke na-eme ka mmadu di nwayo
Ndị mmadụ na-enwe mmasị inwe egbugbere ọnụ anụ ahụ n'akụkụ n'akụkụ; Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
4. Oke anụ ugo n'elu ogwe aka dị n'ihu na-eme ka mmadụ bụrụ ihe efu
Ndị mmadụ na-ahụ ọnyà nke Raven na ogwe aka ha site na nhazi ime ink ojii; egbu egbu egbu a na-eme ka ha yie ka ọ dị oke mma
5. Ogbugbu nke anụ ugolo n'apata ụkwụ aka ekpe, na-elekwasị anya na ụmụ agbọghọ
Ihe ka ọtụtụ ụmụ nwanyị na-achọ ime ka ụbụrụ na-egbuke egbuke n'apụrụ ụkwụ aka ekpe ha iji gosipụta iguzosi ike n'ihe ha na ime ka ha yie anya
6. Ntube azu ugo a na ejiji ejiji na-eme ka ogwe aka ekpe chee ihu
Ụmụ nwanyị ndị uwe ojii na-ejighị aka ha ga-ahụ n'anya iji nweta mkpịsị ugodi a na-acha ọcha, Ube na-egbu egbu na ogwe aka ekpe ha iji mee ka ha mara mma.
7. Oke nchara na azụ na-eme ka nwa agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ na-achọ ime ka nsị na-egbu egbu na azụ ha. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha dị ọkụ ma dị mma
8. Ogbugbu nke anụ ugo maka ụmụ nwoke nwere ink nke oji na-eme ka nwoke mara mma
Ndị mmadụ na-ahụ ọnyà Raven na ubu ha na ejiji ink ojii; nke a na-eme ka ha dị oke mma
9. Ogbugbere ugo n'elu ubu na-eme ka ndi mmadu lee anya n'omume
Ndị mmadụ ga-enwe mmasị ịnwụ Ọkụ nke anụ ugogbe n'elu ubu ha. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
10. Ogbugbu nke anụ ugogbe na igbe dị n'elu ya na ejiji ink na-eme ka nwoke mara mma
Ndị mmadụ ga-aga maka egbugbere ọnụ anụ ọhịa na-enwe nkwekorita ink nke dị n'elu ọnụ ha iji mee ka ha dị mma ma mara mma
11. Oke ugo n'ubu na-eweta anya nke na-adọrọ adọrọ
Ụmụ agbọghọ na-eyikwasị uwe na-enweghị aka na-ahụ n'anya iji nweta ihe eji egbu egbu na-egbu egbu n'ubu ha. Nke a mere ka ha yie ihe mara mma
12. Ogbugbu nke anụ ugo n'azụ na-eweta anya na-adọrọ adọrọ
Ụmụ agbọghọ ndị na-eto eto na-etinye aka na-enweghị aka ga-ahụ ụta nke anụ ugogbe azụ azụ; egbu egbu egbu a na-eme ka ha yie ihe mara mma
13. Ogbugbere ugo n'ubu na-eme ka nwa agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ Brown ga-ahụ ọnyà Raven na ubu ha na mkpịsị ojii onk imewe okpueze; egbu egbu egbu a na-eme ka ha maa mma
14. Ogbugbe anụ ugo maka ụmụ nwoke na-eme ka ha lee anya
Ndị mmadụ na-ahụ ihe ngosi onk nke ink nke Ube na ubu iji mee ka ha di egwu
15. Ogbugbe ugo na apata ụkwụ na-enye ụmụ agbọghọ ahụ mara mma
Ụmụ agbọghọ, karịsịa uwe na obere mkpịsị aka dị mkpirikpi ga-aga maka ụtarị nke anụ ugogbe n'akụkụ akwara ha iji mee ka ha mara mma karịa ụmụ nwoke.
16. Ogbugbere ugo n'apata ụkwụ na-enye ụmụ agbọghọ ahụ anya na-adọrọ adọrọ
Ụmụ agbọghọ, karịsịa uwe na obere mkpirisi dị mkpirikpi ga-aga maka ụtarị nke anụ ugogbe n'akụkụ akwara ha iji mee ka ha dịkwuo mma ma mara mma.
17. Ogbugbu nke anụ ugogbe na azụ azụ ya na ejiji ink pink, mee ka ụmụ agbọghọ mara mma
Ụmụ nwanyị na akpụkpọ anụ ahụ na-acha uhie uhie ga-aga n'ihi igbu egbugbere ọnụ a na azụ ha n'azụ ejiji pink, iji mee ka ha nwee anya mara mma.
18. Oke nchara nke na-egbuke egbuke na ogwe aka dị ala na-egosi anya ha
Ndị mmadụ na-ahụ ọnya Ibeọma na ogwe aka nke aka. Nke a na-enye ọdịdị nwoke
19. Ogbugbu nke anụ ugo maka ụmụ nwoke na-eji ejiji ink na-eme ka ha nwee ọgụgụ isi
Ndị mmadụ na-ahụ ụdị ọnyà nke anụ ọhịa ahụ na ejiji ink nke onu n'ubu; Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
20. Oke anụ ugo n'okpuru ebe a na-eme ka mmadụ dị jụụ
Ndị mmadụ na-enwe mmasị ịnwụ egbu anụ n'okpuru ebe ndị ahụ; Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
21. Ihe omimi nke ime ihe nchara nke anụ ugo na ụkwụ na-acha agba akpụkpọ na-eme ka mmadụ hụ anya
Ndị mmadụ na-enwe mmasị ịkpụcha egbugbere ugo a na ụkwụ ha. Ụdị egbu egbu a na-ejikọta agba nke ụkwụ iji mee ka onye ahụ mara mma
22. Ogbugbe anụ ugo maka ubu na-enye ụmụ agbọghọ nta anya
Ụmụ agbọghọ, ndị uwe na-eji aka ha na-akacha aka ga-aga maka igbu egbugbere ọnụ n'ubu ha iji mee ka ọha na eze mara ha
23. Oke nchara na azụ na-eme ka nwa agbọghọ mara mma
24. Oke nchara nke anụ ọhịa na azụ na-eme ka anya nwanyi
Ụmụ agbọghọ dị ka ọmarịcha egbu egbu na-egbu egbu na azụ aka. Ejiji egbu egbu a mara mma.
ndị mmụọ oziaka akaokpueze okpuezeAnkle Tattoosenyi kacha mma enyiegbu egbu mmiriEgwu ugoegbugbu egbugbuọnwa tattoosegbugbu maka ụmụ agbọghọegwu egwuegbu egbu ebighi ebin'olu olunnụnụegbu egbu okpuegbu egbu hennaegbu egbuechiche egbugbumehndi imewearịlịka arịlịkaọdụm ọdụmmma tattoosakara ntụpọdi na nwunyeegbu egbu diamondrip tattoosegbu egbu maka ụmụ nwokeụmụnne mgbuaka mma akaegbu egbu osisi lotusụkwụ akaỤdị ekpomkpaenyí egbu egbuaka akazodiac akara akaraegbu egbu egbuazụ azụakwara obikoi ika tattooagbụrụ ebona-adọ aka mmana-egbu egbuNtuba ntugharindị na-egbuke egbukeudara okooko osisiima ima mmaakpị akpịUche obiGeometric Tattoosngwusi pusi